ယူနိုက်တက်မှာ အမြင့်ပျံလာတဲ့ လင်ဒီလော့ဖ် | FOX Sports Myanmar
ပရီးမီးယားလိဂ် (PL) | ဇူလိုငျ 22, 2019
ယူနိုက်တက်မှာ အမြင့်ပျံလာတဲ့ လင်ဒီလော့ဖ်
မနှစ်ကရာသီမှာ ပေါင်ခြံဒဏ်ရာရရှိနေရင်းနဲ့ကိုအသင်းအတွက် နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ကစားပေးသွားခဲ့တဲ့ လင်ဒီလော့ဖ် ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကလက်ရှိမန်ချက်စာတာယူနိုက်တက်အသင်း ကစားသမားတွေထဲမှာ ပထမဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ နိုင်ပွဲရယူလိုတဲ့ တစ်ချိန်က သရဲနီစိတ်ဓါတ်လို့ ဆိုကြပါဆို့။
လက်ရှိမန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းသားတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာအသင်းအတွက် တိုက်ပွဲဝင်စိတ် နောက်ဆုံးအချိန်ထိ နိုင်ပွဲရယူလိုစိတ်တွေပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ဒီကနေပြန်လည်အစပြုနိုင်မလားဆိုတာ တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။လင်ဒီလော့ဖ် အစောပိုင်းကာလတွေမှာ ဝေဖန်မှုတွေကြား လူးလွန့်နေခဲ့ရပေမယ့် ဒီရာသီမှာတေ့ာ လုဒ်ရှောနဲ့ တွဲထက်ပြီးအသင်းရဲ့ ဘယ်ခြမ်းခံစစ်ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းကျောင်းနိုင်နေတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။
သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာက အသင်းအတွက်ပွဲထွက်ကစားခိုင်းတဲ့အချိန်တိုင်း ဒီဂျာစီအောက်မှာ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပေးဆပ်ကစားဖို့လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော့ တခြားကစားသမားတွေအသင်းအတွက် ရုန်းကန်နေရချိန် အသင်းကနေထွက်ခွာချင်နေကြချိန်မှာ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာကို လင်ဒီလော့ဖ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံပါပဲ။သူ့ရဲ့အသင်းအပေါ်မှာထားခဲ့ စိတ်ဓါတ်ကြောင့်ပဲ ပွဲထွက်ခွင့်တွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုင်ဆိုင်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါစို့။
လင်ဒီလော့ဖ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတည်းက သူပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရရှိတဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်း ရလဒ်ကောင်းခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ၊ အာဆင်နယ် နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာလည်း သူခြေစွမ်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမားတွေမှာ ရှိရမယ့် ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းမှာ ရှိနေခဲ့ပြီးသား ကစားသမားတစ်ဦဖြစ်တဲ့အတွက် သူရဲ့တိုးတက်မှုပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရင် နှေးနေပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့သူအသားကျလာခဲ့ပါပြီ။
Lindelof played last5minutes injured. Put his body on the line for his teammates. He knows what it means to be wear this shirt. Sadly none of the others do. #mufc pic.twitter.com/9i0qyHwdRZ
— Simply Utd (@SimplyUtd) 24 November 2018
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဆွီဒင်အသင်းအတွက် ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သလို အသင်းရဲ့အဓိက နောက်တန်းကျောက်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ အင်္ဂလန်အသင်းကို အရေးနိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် သူစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကစားဟန်တွေက အသင်းရဲ့အောင်ပွဲတွေအတွက်တကယ့်ကိုအသိအမှတ်ပြုရမယ့် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအသင်းမှာ ပွဲထွက်နေတဲ့ နောက်တန်းကစားသမားတွေထဲမှာ လင်ဒီလော့ဖ်က ဘောလုံးပေးပို့မှုအကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး (၈၈) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို တိတိကျကျစွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။တစ်ပွဲပျမ်းမျှ ပြိုင်ဘက်ဆီကနေ လုယူရှင်းထုတ်နိုင်စွမ်းက (၁.၅) ကြိမ်သာရှိနေခဲ့လို့ နောက်တန်းကစားသမားတစ်ဦးအနေနဲ့ပြောရရင် တကယ့်ကိုနည်းပါးနေတဲ့အခြေအနေပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူရဲ့အမြင့်ဘောရှင်းထုတ်နိုင်စွမ်း နဲ့ လူကပ်ကစားနိုင်စွမ်းတွေကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကထက် တော်တော်လေးကို တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။
မော်ရင်ညိုကိုယ်တိုင်က ကစားသမားတွေကို ဝေဖန်တက်သူဖြစ်ပေမယ့် လင်ဒီလော့ဖ်ကို ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီး သူ့ဆီကနေ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေရရှိစေဖို့ကို မော်ရင်ညို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။သူ့ဆီကနေ ကောင်းတဲ့အရာတွေကို ဘယ်လိုထုတ်ယူရမယ်ဆိုတာကို မော်ရင်ညိုကောင်းကောင်းသိထားပြီးသားဖြစ်လို့ သူဘယ်လိုမှားမှားမဝေဖန်ပဲနေရာတစ်ခုကိုပေးအပ်ခဲ့လို့ ဆိုးလ်ရှားလက်ထပ်မှာလည်း အဓိက ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် လင်ဒီလော့ဖ် ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ကစားဟန်တွေကို လင်ဒီလော့ဖ်ဆီမှာ မြင်တွေ့လာခဲ့ရပြီး စမောလင်းနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ခံစစ်ကြောင်းကို ဦးဆောင်နေတယ်ဆိုပေမယ့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်း ဗဟိုခံစစ်မှူးတစ်ဦးကိုတော့ ခေါ်ယူသွားဦးမယ့် အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။
မိံစ်ြကရာသီမြာ ပေၝင်ူခံဒဏ်ရာရရြိနေရင်းနဲႛကိုအသင်းအတကြ် နောက်ဆုံးအခဵိန်ထိ ကစားပေးသြားခဲ့တဲ့ လင်ဒီလော့ဖ် ရဲႚ ပုံရိပ်တေကြို အားလုံူးမင်တြေႚခဲ့ရပၝတယ်။ဒၝကလက်ရြိမန်ခဵက်စာတာယိူိုံက်တက်အသင်း ကစားသမားတေထြဲမြာ ပထမဆုံူးမင်တြေႚခဲ့ရတဲ့ နောက်ဆုံးအခဵိန်ထိုံင်ပြဲရယူလိုတဲ့ တစ်ခဵိန်က သရဲနီစိတ်ဓၝတ်လိုႛ ဆိုကပၝဆိုႛ။
လက်ရြိမန်ခဵက်စတာ ယိူိုံက်တက်အသင်းသားတေရြဲႚ စိတ်ထဲမြာအသင်းအတကြ် တိုက်ပြဲဝင်စိတ် နောက်ဆုံးအခဵိန်ထိုံင်ပြဲရယူလိုစိတ်တေပြေဵာက်ဆုံးနေခဲ့တာုကာူမင့်ခဲ့္ဘပီူဖစ်လိုႛ ဒီကနေူပန်လည်အစူပြိုံင်မလားဆိုတာ တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားမိပၝတယ်။လင်ဒီလော့ဖ် အစောပိုင်းကာလတေမြာ ဝေဖန်မတြေုကား လူးလနြ်ႛနေခဲ့ရပေမယ့် ဒီရာသီမြာတေ့ာ လုဒ်ရြောနဲႛ တြဲထက်္ဘပီးအသင်းရဲႚ ဘယ်ူခမ်းခံစစ်ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းကေဵာင်ိးိုံင်နေတာကိုမင်တြေႚရပၝတယ်။
သူႛရဲႚစိတ်ထဲမြာ ရြိနေတာက အသင်းအတက်ြပြဲထက်ြကစားခိုင်းတဲ့အခဵိန်တိုင်း ဒီဂဵာစီအောက်မြာ (၁၀ဝ) ရာခိုင်ိံနြ်ူးပည့်ပေးဆပ်ကစားဖိုႛလိုႛဆိုပၝတယ်။ဒီတော့ တူခားကစားသမားတေအြသင်းအတကြ် ရုန်းကန်နေရခဵိန် အသင်းကနေထက်ြခြာခဵင်နေုကခဵိန်မြာ စိန်ခေၞမတြေနြဲႛရင်ဆိုင်ရတာကို လင်ဒီလော့ဖ်ပေဵာ်ရင်ြနေတဲ့ပုံပၝပဲ။သူႛရဲႚအသင်းအပေၞမြာထားခဲ့ စိတ်ဓၝတ်ေုကာင့်ပဲ ပြဲထက်ြခငြ့်တေကြို တူဖည်ူးဖည်းနဲႛ ပိုင်ဆိုင်လိာိုံင်ခဲ့တယ်လိုႛ ဆိုကပၝစိုႛ။
လင်ဒီလော့ဖ် နဲႛ ပတ်သက်တဲ့ မတ်ြတမ်းကောင်းတစ်ခုရြိနေပၝသေးတယ်။ဒၝကတော့္ဘပီးခဲ့တဲ့ရာသီတည်းက သူပြဲထက်ြကစားသမားအူဖစ် ပၝဝင်ခငြ့်ရရြိတဲ့ပြဲစဉ်တိုင်းမြာ မန်ခဵက်စတာ ယိူုိံက်တက်အသင်း ရလဒ်ကောင်းခဲ့တဲ့ မတ်ြတမ်းပဲူဖစ်ပၝတယ်။မန်စီးတီးနဲႛ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဉ် ၊ အာဆင်နယ် နဲႛ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဉ်တေမြာလည်း သူေူခစမြ်းကောင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပၝတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမားတေမြာ ရြိရမယ့်ုကံ့ခိုင်မပြိုင်းမြာ ရြိနေခဲ့္ဘပီးသား ကစားသမားတစ်ဦူဖစ်တဲ့အတကြ် သူရဲႚတိုးတက်မပြိုင်းနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီုးကည့်ရင်ြေိံးနေပေမယ့် တူဖည်ူးဖည်းနဲႛတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲႛသူအသားကဵလာခဲ့ပၝ္ဘပီ။
ကမ္တာႚဖလား္ဘပိင်ြပြဲမြာ ဆီဒြင်အသင်းအတကြ် ပြဲထက်ြကစားသမားအူဖစ်ပၝဝင်ခဲ့သလို အသင်းရဲႚအဓိက နောက်တန်းကေဵာက်ဆောင်ူဖစ်ခဲ့ပၝတယ်။ကြာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မြာ အဂဿလန်အသင်းကို အရေးနိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် သူစမြ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကစားဟန်တေကြ အသင်းရဲႚအောင်ပြဲတေအြတက်ြတကယ့်ကိုအသိအမတြ်ူပရြမယ့် ကစားသမားတစ်ဦူးဖစ်ခဲ့ပၝတယ်။
လက်ရြိအသင်းမြာ ပြဲထက်ြနေတဲ့ နောက်တန်းကစားသမားတေထြဲမြာ လင်ဒီလော့ဖ်က ဘောလုံးပေးပိုႛမအြကောင်းဆုံးလိုႛဆိုရမြာူဖစ်္ဘပီး (၈၈) ရာခိုင်ိံနြ်းလောက်ကို တိတိကဵကဵစမြ်းဆောင်ိုံင်ပၝတယ်။တစ်ပြဲပဵမ်းမ္တ္ဘွပိင်ြဘက်ဆီကနေ လုယူရငြ်းထုတ်ိုံင်စမြ်းက (၁.၅) ဋ္ဌကိမ်သာရြိနေခဲ့လိုႛ နောက်တန်းကစားသမားတစ်ဦးအနေနဲႛေူပာရရင် တကယ့်ကိုနည်းပၝးနေတဲ့အေူခအနေပၝတယ်။ဒၝပေမယ့် သူရဲႚအူမင့်ဘောရငြ်းထုတ်ိုံင်စမြ်း နဲႛ လူကပ်ကစာိးိုံင်စမြ်းတေကြတော့္ဘပီးခဲ့တဲ့ရာသီကထက် တော်တော်လေးကို တိုးတက်လာခဲ့ပၝတယ်။
မော်ရင်ညိကြိုယ်တိုင်က ကစားသမားတေကြို ဝေဖန်တက်သူဖစ်ပေမယ့် လင်ဒီလော့ဖ်ကို ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကိုေူပာင်းလဲခဲ့္ဘပီး သူႛဆီကနေ စမြ်းဆောင်ရည်ကောင်းတေရြရြိစေဖိုႛကို မော်ရင်ညြိ ဖန်တီးခဲ့ပၝတယ်။သူႛဆီကနေ ကောင်းတဲ့အရာတေကြို ဘယ်လိုထုတ်ယူရမယ်ဆိုတာကို မော်ရင်ညိကြောင်းကောင်းသိထား္ဘပီးသာူးဖစ်လိုႛ သူဘယ်လိုမြားမြားမဝေဖန်ပဲနေရာတစ်ခုကိုပေးအပ်ခဲ့လိုႛ ဆိုးလ်ရြားလက်ထပ်မြာလည်း အဓိက ကစားသမားတစ်ဦးအူဖစ် လင်ဒီလော့ဖ် ဆက်လက်ရြိနေခဲ့ပၝတယ်။
ဒီတော့ တူဖည်ူးဖည်းနဲႛ ရင့်ကဵက်တဲ့ကစားဟန်တေကြို လင်ဒီလော့ဖ်ဆီမြာူမင်တြေႚလာခဲ့ရ္ဘပီး စမောလင်းနဲႛ တြဲဖက်္ဘပီး ခံစစ်ေုကာင်းကို ဦးဆောင်နေတယ်ဆိုပေမယ့် မန်ခဵက်စတာ ယိူိုံက်တက်အသင်း ဗဟိုခံစစ်မြးတစ်ဦးကိုတော့ ခေၞယူသြားဦးမယ့် အေူခအနေမြာရြိနေပၝတယ်။
Home Football Premier League ယူနိုက်တက်မှာ အမြင့်ပျံလာတဲ့ လင်ဒီလော့ဖ်